Sonos dia manolotra ny fanamafisam-peo "Ray" mora vidy indrindra | iPhone News
Sonos dia manolotra ny fanamafisam-peo "Ray" vaovao mora vidy kokoa saingy manana kalitao mitovy amin'ny mahazatra
louis padilla | 12/05/2022 18:53 | Fitaovana IPhone, About us
Sonos dia nanolotra ny zava-baovaony ary mitondra antsika mpandahateny vaovao ho an'ny efitrano fandraisam-bahiny izay hahatonga antsika ankafizo ny sarimihetsika sy andian-tantara miaraka amin'ny feo tsara indrindra nefa amin'ny vidiny mora kokoa. Nampahafantatra antsika ny mpanampy feony sy loko vaovao ho an'ny Sonos Roam ihany koa izy.
1 Sonos Ray, ny fanamafisam-peo vaovao ho an'ny rehetra
2 Loko vaovao ho an'ny Sonos Roam sy mpanampy feo vaovao
Sonos Ray, ny fanamafisam-peo vaovao ho an'ny rehetra
Sonos dia nanampy mpandahateny vaovao amin'ny katalaogin'ny fanamafisam-peo lehibe. Ny Sonos Beam sy Sonos Arc dia nanatevin-daharana ny Sonos Ray vaovao, fanamafisam-peo matevina kokoa izay mampanantena kalitao avo lenta mba hankafizana tanteraka ny votoatiny multimedia ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny na efitrano fatoriana, ankoatry ny fahafahana mampiasa azy io ho mpandahateny hihaino mozika noho ny fampidirana amin'ny Apple Music sy Spotify, ary ny fifanarahana amin'ny AirPlay 2.
Ny feony malefaka dia tsy tokony hamitaka antsika araka ny filazan'i Sonos, satria hampiasa ny manodidina azy izy mba hamoronana feo manerana ny efitrano, ankoatra ny rafitra Base Reflex mba hifehezana ny bass. Izy io koa dia mitazona ireo endri-javatra sarobidy indrindra amin'ny modely lafo vidy kokoa, toy ny fanamafisam-peo mba hahafahanao mandre tsara ny fifanakalozan-kevitra na dia amin'ny ankamaroan'ny sarimihetsika mihetsika, ary fomba fiasa alina izay mampihena ny hamafin'ny feo mafy indrindra amin'ny alina mba tsy hanelingelina ny mpikambana hafa ao an-trano na ny mpiara-monina.
Mazava ho azy fa manana izany Wi-Fi sy Ethernet fifandraisana, mba hahafahana mitendry mozika avy amin'ny serivisy mivantana mivantana, na mandefa ny atiny izay alefantsika amin'ny iPhone na iPad amin'ny alàlan'ny AirPlay. Ny fanaraha-maso fanamafisam-peo dia mihetsiketsika ary hita eo an-tampony, ary azontsika atao koa ny mifehy azy amin'ny alàlan'ny fampiharana Sonos avy amin'ny iPhone na iPad-ntsika.
Inona no very raha oharina amin'ny modely ambony? Ity Sonos Ray ity manana fifandraisana optika ihany, noho izany dia very ny fifanarahana amin'ny mari-pamantarana feo avo lenta toy ny Dolby TrueHD, DTS HD Master Audio na Dolby Atmos. Ho setrin'izany dia hanana fifanarahana amin'ireo maodely fahitalavitra tranainy izay tsy manana vokatra eARC isika, ilaina amin'ireo feo avo lenta ireo. Very ny mikrô koa izahay, noho izany dia tsy azo fehezina mivantana amin'ny alalan'ny feo ity bara fanamafisam-peo ity, na dia azonay atao aza izany amin'ny alàlan'ny smartphone. Na dia tsy manana fifandraisana HDMI aza, dia afaka mampiasa ny fanaraha-maso lavitra mahazatra izahay mba hifehezana ny feo noho ny mpandray infrarouge eo anoloana.
Ho hita ny Sonos Ray vaovao manomboka amin'ny 7 Jona ary ho vidiny €299, eo ambanin'ny €499 an'ny Sonos Beam na ny €999 an'ny Sonos Arc mahafinaritra, ilay vatosoa amin'ny satroboninahitra.
Loko vaovao ho an'ny Sonos Roam sy mpanampy feo vaovao
Manomboka amin'ny volana Jona dia hanana mpanampy feo vaovao ao an-trano isika. Amin'ny alàlan'ny teny hoe "Hey Sonos" dia afaka mifehy ny mpandahateny Sonos izahay, raha toa ka manana ny chip S2 izy ireo, ary miaraka amin'ny tombony fa ny fanodinana ny baiko rehetra dia hotanterahina ao amin'ny mpandahateny, tsy hisy fifandraisana amin'ny mpizara ary tsy hisy clip misy feo halefa hanaovana fanadihadiana. Ity mpanampy ity dia hifanaraka amin'ny Apple Music sy Amazon Music, saingy tsy mahafantatra na inona na inona momba ny Spotify izahay amin'izao fotoana izao. Amin'izao fotoana izao dia tsy hisy afa-tsy amin'ny teny anglisy, ny dikan-teny frantsay dia efa voamarina alohan'ny faran'ny taona fa tsy mahalala na inona na inona momba ny teny espaniola.
Farany, naseho ny loko vaovao ho an'ny fanamafisam-peo azo entina Sonos Roam. Miaraka amin'ny fifandraisana Wi-Fi sy Bluetooth, mpanampy amin'ny feo ary mifanaraka amin'ny serivisy mozika mivantana, anisan'izany ny Apple Music sy Spotify, dia azo vidiana ihany koa izy ireo (manomboka izao) amin'ny loko telo vaovao: Oliva, Sunset ary Wave.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fitaovana IPhone » Sonos dia manolotra ny fanamafisam-peo "Ray" vaovao mora vidy kokoa saingy manana kalitao mitovy amin'ny mahazatra
Apple dia afaka mampiditra USB-C amin'ny iPhone 15 manao veloma an'i Lightning
Podcast 13x31: Veloma amin'ny iPod, ho ela velona ny iPhone